चीन « Nagarik Khabar
चीनमा एकै दिन १३ हजार कोभिड संक्रमित
बेइजिङ । चीनमा आइतबार एकै दिन १३ हजार १४६ जना कोभिड संक्रमित फेला परेका छन् । यो संख्या दुई वर्षअघि चीनमा सुरू भएको कोभिडको पहिलो लहरपछि अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
चीनमा फेरि कोभिडको त्रास : ३ करोड मानिस लकडाउनमा
बेइजिङ । बढ्दो संक्रमणको घटनाका कारण सामूहिक परीक्षणमा फर्किरहँदा चीनमा मंगलबार करिब ३ करोड जनसंख्या लकडाउनमा छन् । मंगलबार मात्र ५ हजार २८० जना कोभिडका नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए ।
चीनमा दुई वर्ष यताकै धेरै संख्यामा कोभिड संक्रमण
एजेन्सी । चीनमा आज एकै दिन ५ हजार २८० जना कोभिडका नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । यो संख्या चीनमा दुई वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै भएको नेसनल हेल्थ कमिसन (एनएचसी) ले
रुसलाई सहयोग गरे चीनलाई अमेरिकाले आर्थिक दण्ड दिने
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले चीनका एक उच्च कूटनीतिज्ञलाई भेट गर्दैछन् । सुलिभानले चिनियाँ कूटनीतिज्ञ याङ जियिचीलाई सोमबार इटालीको राजधानी रोममा भेट गर्न लागेका हुन् । भेटका
रुसलाई सहयोग नगर्न चीनलाई अमेरिकी चेतावनी
एजेन्सी । अमेरिकाले रुसलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक वा सैन्य सहायता उपलब्ध नगराउन चीनलाई चेतावनी दिएको छ। रुसले चीनसँग त्यस्तो सहायता मागेको अमेरिकी अधिकारीहरूले भिन्नाभिन्नै पत्रिकाहरूलाई बताएका छन्। तर चीनका
कोभिड बढ्यो, चीनको अर्काे एक सहरमा पनि लकडाउन
एजेन्सी । कोभिड संक्रमण बढेपछि चीनको १ करोड ७० लाख जनसंख्या भएको शेनझेन सहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । शेनझेनको दक्षिणी टेक हबले सम्पूर्ण बासिन्दालाई २० मार्चसम्म घरभित्रै बस्न भनेको
नेपालमाथि चीनको अघोषित नाकाबन्दी कहिलेसम्म ?
काठमाडौं । फागुन महिनाको समाप्तिसँगै चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको दुई वर्ष बित्छ । यो अवधिमा नेपाल र चीनबीचको प्रमुख दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी एकतर्फीरुपमा बन्द छन् ।
‘चीनसँगको आयात निर्यातमा गम्भीर असर’
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले चीनसँगको आयात निर्यातमा गम्भीर असर परेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खड्काले चीनसँगको उत्तरी नाकाबाट आयात धेरै भइरहे
ताइवानमा विदेशी हस्तक्षेप र पृथकताबादी गतिविधि अमान्य : चीन
एजेन्सी । चीनले ताइवानसँग ‘पुनर्मिलन’ को योजना दोहोर्‍याउँदै चीनमा कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि वा विदेशी हस्तक्षेपको दृढतापूर्वक विरोध गरेको छ । सन् १९४९ को गृहयुद्धपछि ताइवान चीनबाट अलग भएको थियो
चीनले आफ्नो संस्कृति चोरेको दक्षिण कोरियाको आरोप
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाली नेता र कार्यकर्ताहरुले चीनले आफ्नो संस्कृति चोरेको आरोप लगाएका छन् । बेइजिङ हिउँदे ओलम्पिकको उद्दघाटन समारोहमा एक जना चिनियाँ महिला कलाकारलले परम्परागत कोरियाली लुगा लगाएको भन्दै